Budata Weather Mate APK maka Android
Budata Weather Mate
Free Budata maka Android (4.50 MB)
Budata Weather Mate,
Jiri Weather Mate lelee ihu igwe nụzọ dị mfe, ejidela gị na nche.
Ị na-ebi nebe ihu igwe na-agbanwe mgbe niile? Ihu igwe ọ̀ na-ezo na mberede na anwụ na-achakwa na mberede? Site na Weather Mate, ị gaghị echegbu onwe gị maka ihu igwe. Ị nwere ike jikwaa ihu igwe ngwa ngwa site na ngwaọrụ gam akporo gị, maka ngwa a, nke na-eme ma na-eme amụma amụma zuru oke maka amụma ihu igwe ma mara oke mma.
WeatherBug bụ ngwa Windows 8.1 ebe ị nwere ike ịmụta ọnọdụ ihu igwe kwa ụbọchị na ụbọchị iri nke obodo ị bi ma ọ bụ chọrọ. Na ngwa na-adọta uche na ya mfe interface, ị nwere ike...
AccuWeather bụ ngwa ihu igwe maka Windows 8 na-enye akụkọ ihu igwe zuru oke. Ị nwere ike ịnwale ngwa ahụ nefu na kọmputa gị na mbadamba nkume, nke na-ebufe amụma mpaghara ozugbo...
Ngwa a abụghị naanị na-ebu amụma ihu igwe, kamakwa ọ na-edobe akụkọ ihu igwe ụbọchị 5 ma na-emelite onwe ya kwa elekere dịka ọnọdụ ihu igwe na-agbanwe. Ịkwesịrị ịnwale Weather Mate, ebe ị nwere ike ịgbaso ọnọdụ ihu igwe nke ebe ị họọrọ site na iji interface dị ọcha ma dị mma.
Weather Mate Ụdịdị
Nha faịlụ: 4.50 MB
Mmepụta: Andrei Zhukouski